အစ္စရေးနိုင်ငံ Elbit ကုမ္ပဏီက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ လေကြောင်း မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၄ သန်း တန်ဖိုးရှိသော တိုက်ခိုက်ရေးစစ်လက်နက်များ ပေးပို့ ရန်ရှိ - Xinhua News Agency
အစ္စရေးနိုင်ငံ Elbit ကုမ္ပဏီက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ လေကြောင်း မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၄ သန်း တန်ဖိုးရှိသော တိုက်ခိုက်ရေးစစ်လက်နက်များ ပေးပို့ ရန်ရှိ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Pohang မြို့တွင် ကျင်းပသည့် အမေရိကန်-တောင်ကိုရီးယား ပူးတွဲ ကမ်းတက်လေ့ကျင့်ရေး ပြုလုပ်နေသည်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ် ၃၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဂျေရုဆလင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အစ္စရေးနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး အီလက်ထရွန်နစ် ကုမ္ပဏီ Elbit Systems က တောင်ကိုရီးယား လေတပ်သို့ တိုက်ခိုက်ရေးစစ်လက်နက်များအား လေကြောင်းမှ ပေးပို့ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၄ သန်း တန်ဖိုးရှိသော စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော အဆိုပါ သဘောတူညီချက်သည် ငါးနှစ်တာ ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများအား တောင်ကိုရီးယား လေတပ်၏ ပစ်မှတ်များအား တိကျစွာပစ်ခတ်နိုင်မှုအစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဖြည့်စွမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
“လေတပ်တွေက ပိုမိုခေတ်မီလာပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ကြီးမားတဲ့ ပစ်ခတ်မှုစွမ်းရည်တွေကို ရှာဖွေလာတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းအစုစုအတွက် ဝယ်လိုအား တိုးလာတာကို တွေ့ရပါတယ်” ဟု Elbit ၏ မြေပြင်ဌာနခွဲမှ အထွေထွေမန်နေဂျာ Yehuda Vered က ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အစ္စရေးနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Haifa မြို့တွင် တည်ရှိသော Elbit Systems ကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကာကွယ်ရေး၊ အမိမြေလုံခြုံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်များစွာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့် နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းသည် အာကာသယာဉ်၊ လေယာဉ်တည်ဆောက်မှုနည်းပညာ၊ မြေပြင်နှင့် ရေတပ်စနစ်များ၊ ကွပ်ကဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ဆက်သွယ်ရေးမှုများ၊ ထောက်လှမ်းရေး စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အခြားသောနယ်ပယ်များအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၎င်းကုမ္ပဏီသည် Nasdaq စတော့ဈေးကွက်တွင် ဈေးကွက်သတ်မှတ်ချက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆.၇၂ ဘီလီယံခန့်ဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Israel’s Elbit to provide S.Korea with airborne munitions at 74 mln USD
JERUSALEM, Nov. 11 (Xinhua) — Israeli defense electronics company Elbit Systems announced Thursday that it signeda74-million-U.S.-dollar contract to supplyarange of airborne munitions to the South Korean air force.
The deal, signed with South Korea’s Ministry of National Defense, will be performed overafive-year period, it said inastatement.
The munitions will be supplied as part of the precision fires program of the South Korean Air Force, it added.
“We see an increase in the demand for our diverse portfolio of munitions as air forces seek fires capabilities of greater sophistication and impact,” said Yehuda Vered, general manager of Elbit’s land division.
Elbit Systems, founded in 1966 and located in Israeli northern city of Haifa, is an international hi-tech company engaged inawide range of defense, homeland security and commercial programs worldwide.
It operates in areas of aerospace, land and naval systems, command, control, communications, intelligence surveillance and more.
It is traded at Nasdaq withamarket cap of about 6.72 billion U.S. dollars. Enditem
တရုတ်နိုင်ငံမှ ကူညီပံ့ပိုးတည်ဆောက်ပေးသော လာအိုနိုင်ငံ Mahosot အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးစီမံကိန်း ပထမအဆင့် တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား ဗီယင်ကျန်းမြို့တွင် ကျင်းပ
ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတစ်ခွင် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေး ချိုးဖောက်မှု ရပ်တန့်ရန် အမေရိကန်ကို တိုက်တွန်း